Aịzaya 43 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Jehova ga-akpọkọta ndị ya ọzọ (1-7)
A ga-anwale chi dị iche iche (8-13)
“Unu bụ ndị àmà m” (10, 12)
Ndị Babịlọn ga-ahapụ ndị Chineke (14-21)
“Ka anyị leba okwu mụ na unu anya” (22-28)
43 Ugbu a, Jehova, bụ́ Onye kere JekọbNa Onye kpụrụ ununwa bụ́ ndị Izrel,+ kwuru, sị: “Unu atụla egwu, n’ihi na agbapụtala m unu.+ Akpọrọ m unu aha unu. Unu bụ ndị nke m. 2 Ọ bụrụ na unu agafewe mmiri, m ga-anọnyere unu.+ Ọ bụrụkwa na unu agafewe osimiri, ọ gaghị eri unu.+ Ọ bụrụ na unu agafewe ebe ọkụ dị, ọ gaghị ere unu,Ire ọkụ agaghịkwa ere unu. 3 N’ihi na abụ m Jehova Chineke unu,Onye Nsọ Izrel na Onye Nzọpụta unu. Ejirila m Ijipt, Etiopia, na SibaKwụọ ụgwọ ka a gbapụta unu. 4 N’ihi na ejighị m unu egwu egwu.+ Agụrụ m unu ná ndị e kwesịrị ịkwanyere ùgwù. M hụkwara unu n’anya.+ M ga-eji ndị mmadụ gbanweta unu,Jirikwa mba dị iche iche gbanweta ndụ* unu. 5 Unu atụla egwu, n’ihi na m nọnyeere unu.+ M ga-esi n’ebe ọwụwa anyanwụ kpọlata ụmụ* unu,M ga-esikwa n’ebe ọdịda anyanwụ kpọkọta unu.+ 6 M ga-asị ebe ugwu, ‘Hapụ ha!’+ M ga-asịkwa ebe ndịda, ‘Ejichila ha. Sinụ n’ebe dị anya kpọlata ụmụ m ndị nwoke, sikwanụ ná nsọtụ ụwa kpọlata ụmụ m ndị nwaanyị.+ 7 Kpọlatanụ onye ọ bụla nke na-aza aha m,+Onye m kere ka a na-eto m,Onye m kpụrụ na onye m kere.’+ 8 Kpọpụtanụ ndị nwere anya, ma ha kpuru ìsì,Ndị nwekwara ntị, ma ntị chiri ha.+ 9 Ka mba niile zukọọ otu ebe. Ka mmadụ niile zukọtakwa.+ È nwere chi ga-ekwuli ihe a? Ma ọ bụ hà ga-emeli ka anyị nụ ihe mbụ ga-emenụ?+ Ka ha kwuo otú o si bụrụ na ihe ha mere ziri ezi, ka ha kpọpụtakwa ndị àmà ha,Ka ha nụ ya, kwuokwa, sị, ‘Ọ bụ eziokwu!’”+ 10 Jehova kwuru, sị: “Unu bụ ndị àmà m.+ N’eziokwu, unu bụ ndị ohu m* m họọrọ,+Ka unu mara m, nweekwa okwukwe n’ebe m nọ,*Ka unu ghọtakwa na anaghị m agbanwe agbanwe.+ Ọ dịghị Chi dị tupu mụnwa,E wezụgakwa m, e nweghị chi ọzọ dị.+ 11 Abụ m Jehova.+ E nweghịkwa onye nzọpụta ọzọ ma e wezụga m.”+ 12 Jehova kwuru, sị: “Mgbe chi ọzọ na-adịghị n’ala unu,+Ọ bụ m kwuru ihe ga-eme, zọpụta unu, meekwa ka a nụ ya. N’ihi ya, unu bụ ndị àmà m. Abụkwa m Chineke.+ 13 Anaghịkwa m agbanwe agbanwe.+ O nweghị onye ga-anapụtali m ihe m ji n’aka.+ M mewe ihe m chọrọ ime, ònye ga-egbochili m ime ya?”+ 14 Jehova, Onye Mgbapụta unu,+ bụ́ Onye Nsọ Izrel,+ kwuru, sị: “M ga-eji maka unu zie ndị agha ka ha gaa Babịlọn ma wepụchaa ihe e ji tụchie ọnụ ụzọ ámá,+Meriekwa ndị Kaldia nọ n’ụgbọ mmiri, ha ana-eti mkpu n’ihi ahụhụ ha na-ata.+ 15 Abụ m Jehova, Onye Nsọ unu,+ Eze unu,+ na Onye kere Izrel.”+ 16 Jehova bụOnye na-eme ka ụzọ dị n’oké osimiriNa onye na-eme ka ụzọ dị na mmiri na-amali elu.+ 17 Ọ bụ ya na-akpụpụta ụgbọ ịnyịnya agha na ịnyịnya,+Na-akpọpụtakwa ndị agha na ndị bụ́ dike n’agha. Ọ sịrị: “Ha ga-edina ala. Ha agaghị ebili.+ A ga-egbu ha n’egbughị oge otú ahụ e si afụnyụ ọkụ dị n’owu mpanaka* n’egbughị oge.” 18 “Unu echetakwala ihe ndị gara aga. Unu echegbukwala onwe unu gbasara ihe ndị gara aga. 19 Ana m eme ihe ọhụrụ.+ Emewedịla m ya. Ọ̀ bụ na unu amaghị gbasara ya? M ga-awa ụzọ n’ala ịkpa,+Meekwa ka osimiri sọfee n’ọzara.+ 20 Anụ ọhịa ga-akwanyere m ùgwù,Ma nkịta ọhịa ma enyí nnụnụ,Maka na emeela m ka mmiri dị n’ala ịkpa,Meekwa ka osimiri dị n’ọzara,+Ka ndị m, bụ́ ndị m họọrọ,+ ṅụọ mmiri. 21 Ha bụ ndị m kpụụrụ onwe m,Ka ha nwee ike ịna-akọ ihe ndị m mere e kwesịrị iji maka ha too m.+ 22 Ma Jekọb, ị kpọghị m ka m nyere gị aka,+N’ihi na ike m agwụla ununwa bụ́ ndị Izrel.+ 23 Unu akpụtaraghị m atụrụ mgbe unu bịara ịchụ àjà a na-esucha ọkụ,Unu achụghịkwa àjà dị iche iche iji too m. Amanyeghị m unu ka unu wetara m onyinye. Emeghịkwa m ka ike gwụ unu n’ihi na asịghị m unu wetara m frankinsens.+ 24 Unu ejighị ego unu zụtara m okpete na-esi ísì ọma. Unu ejighịkwa abụba si n’àjà ndị unu chụrụ mee ka afọ ju m.+ Kama, mmehie unu dị m ka ibu arọ. Unu ejirikwala ajọ omume unu mee ka ike gwụ m.+ 25 Ọ bụ m bụ Onye na-ehichapụ mmehie unu*+ n’ihi aha m.+ Agaghịkwa m echeta mmehie unu.+ 26 E nwee ihe m chefuru, chetaranụ m. Ka anyị leba okwu mụ na unu anya. Kwuonụ ihe gosiri na aka unu dị ọcha. 27 Onye mbụ bụ́ nna unu mehiere. Ndị na-ekwuchite ọnụ* unu enupụrụla m isi.+ 28 N’ihi ya, m ga-ewere ndị isi nke ebe nsọ ka ndị rụrụ arụ. M ga-eme ka e bibie Jekọb,Meekwa ka a kparịa ndị Izrel.+
^ Na Hibru, “unu bụ ohu m.”
^ Ma ọ bụ “tụkwasịkwa m obi.”
^ Ma ọ bụ “isi unu na-enupụ.”
^ O nwere ike ịbụ ndị na-akụziri ha Iwu Chineke.